Fifidianana: kandidà filoham-pirenena i Beriziky Jean-Omer | NewsMada
Fifidianana: kandidà filoham-pirenena i Beriziky Jean-Omer
Niampy iray indray. Nanamafy ny maha kandidà hofidiana filoham-pirenena azy teny amin’ny tranon’ny Pr Zafy eny Ivandry ny Praiminisitra teo aloha, Beriziky Jean-Omer. Natolotry ny vovonona ”Soa iombonana” ny tenany amin’izany fifidianana izany.
“Azo kianina ny fotoana sy ny fomba hanatanterahana ny fifidianana. Saingy amin’ny maha mpandala ny demokrasia ny tenako, tsy mandà velively ny hisian’ny fifidianana aho. Koa tapa-kevitra ary vonona aho fa hirotsa-kofidina ho filoham-pirenena amin’ny fifidianana ho avy.”
Izay ny nanambaran’ny Praiminisitry ny Tetezamita teo aloha, i Beriziky Jean-Omer, teny amin’ny tranon’ny Pr Zafy Albert, Ivandry, afakomaly, ny fanekeny ny fanoloran’ny fikambanana Soa iombonana ivondronan’ny antoko UNDD sy ny fikambanana maro hafa azy ho kandidà filoham-pirenena.
Handroso volavolan-dalàmpanorenana repoblikanina roa hosafidin’ny vahoaka ry zareo ao amin’ny Soa iombonana. Ny fitsinjiram-pahefana sy ny fitondrana tantana no hifotoran’ny rafi-panjakana amin’izany.
Teny ifampierana hatao hanampy ny vahoaka
“Manome toky aho fa tsy hivadika na oviana na oviana amin’ny teny nomeko, mifanaraka amin’ny hetahetan’ny vahoaka amin’ny alalan’ny teny ifampierana”, hoy izy. Heveriny fa tokony ho nierana tamin’ny rehetra ny datim-pifidianana: ny ankolafin-kery politika, ny hery velona. Anisan’izany, ohatra, ny HFI sy ny K 3F.
Ifotorany ny amin’ny fanorenana ifotony sy ny fampihavanam-pirenena nimatimatesan’ny Pr Zafy Albert nitsanganan’ny antoko UNDD, miaraka amin’ireo fikambanana maro. Very tanteraka ny fitokisan’ny vahoaka ny andrimpanjakana rehetra heveriny hiaro azy, hany very hasina ny fitantanam-panjakana.
Manana vinam-piarahamonina ho fampandrosoana an’i Madagasikara izy, ary hampahafantariny amin’ny fotoan’ny fampielezan-kevitra izany. “Manana adidy hitondra ny anjara biriky amin’ny fanarenana an’i Madagasikara aho”, hoy ihany izy. Tsiahivina fa kandidà koa ny Praiminisitra teo aloha, ny Jly Ravelonarivo Jean.